Iza no tianao, Electric scooter na Skateboards - Jomo Teknolojia Co., Ltd
Maro ny toeram-pivarotana aterineto no nanomboka nanolotra tena ny mampifandanja ny môtô sy ny hoverboards indray. Mangina Scooter Mitondra priced ara-drariny, indrindra Avenue-toetra ara-dalàna, ny Koowheel green electric scooters fanondranana any Eoropa. Ny tanana na ny tongotra-niasa notapahiny mamela anao mba hampitsahatra avy hatrany ny scooter tsy fandatsahana ny mizana. Miaraka miasa izany ianao ho afaka hamela ny fahamarinan-toerana scooter amin'ny fahitana ary tsy matahotra fa misy olona dia mitaingina azy io izy araka ny tsy mety miasa mandra-mandroso ny bokotra indray mandeha indray. Ireo dia naorina ho amin'ny fenitra ambony ireo ny mpitatitra tsy miankina dia haorina any, ary tsy misy ny fiarovana olana fa maro ny marika kely manana. Ny môtô ihany koa ny atao eo amin'ny toro lalana, rehefa mitovy ny microprocessors ho toy ny mpisolo toerana ny saina ny famantarana an-tsambo ho any amin'ny maotera.
Electric foldable Scooters mety na dia ho azo antoka kokoa noho ny bisikileta satria izy ireo matetika vita amin'ny plastika sarotra fitaovana ary dia tsy voatery manao hetsika ara-batana maro izay mety hiteraka ratra mety. Rehefa mety ho vita tanteraka ny mpitaingina tutorial dia mety hankasitraka ny lafiny rehetra amin'ny fampiharana. Inona avy ireo safidy ny tsara indrindra ho an'ny tanora telo scooter? Satria famoronana tonon-taolana kokoa mendrika ny ho famatrarana ratra izay mety hiafara amin'ny taola-malemy ratra sy olana maharitra, aretin-jaza milaza ambany fampiasana hery miasa mangina, indrindra ho an'ny tanora izay matavy tonon-taolana Efa-doza. Iza no te handeha ianao, rehefa ho afaka hisosa, mety? Hoverboards koa miovaova isan-karazany ao anatin'ny kodia. Maro no alefa mivantana avy any Shina dia toy izany no haka 7-12 andro vao tonga ao amin'ny US. Raha te-hifady hanina kokoa, dia afaka haka ny hoverboard ampitan-dranomasina ao amin'ny trano fanatobiana entana. Kosa tanora sy olon-dehibe maro no zatra mitaingina bisikileta izay manana kodiarana anoloan'ny freins, ka manangàna-reraka braking dia azo antoka kokoa, ary na dia mampihena ny mety Ny kely ho hatsipy aloha kosa nijanona avy hatrany. Ny faobe natao tamin'ny threaded kodiarana ho iray amin'ireo tsara indrindra eo amin'ny fitantanana sy ny mafy efa ho misy ambony, dia ny amoron-dranomasina! Misy koa fitantanana kely lavitra izay mahatonga anao ho afaka hifehy ny Electric skateboard .
Isika indrindra indrindra efa matihanina sy za-draharaha endrika tehinareo ho eny an ny sehatra, ary tsy mizaha tavan'olona na dia manana manakiana patanty fahaizany, nandroso maso sy ny orinasa mpamokatra entana fitaovana fototra izay miantoka ny vokatra tsara. Misy olo-malaza maro mampiasa io fitaovana tena mahay mampifandanja sy fitaovana ity ho lasa nitombo indrindra sy tsara indrindra nangataka fialan-tsasatra fividianana fampiroboroboana ny olana tamin'ity taona ity (2018). Ny tena E1 dia tena Nahazo teny fiderana ny ankamaroan'ny tanora. Dingana fotsiny eo, dia hanana ny fahafahana handeha izany amin'ny minitra, ny isan'andro ihany fianarana mitaingina 3-5 minitra. Raha mitaingina reraka, dia azo aforitra. Noho izany dia tena mety.
Ny anankiray hafa dia Wireless lavitra herinaratra skateboard amin'ny Replaceable Pu kodiarana Unique endrika hanampy Motors hihena maximumly Max Speed 42km / h, ary eran-tany mitarika, fitokonana ary ny asa araka heverina ny olona. Ny ao ambadiky ny tehina skateboard ity dia miantso azy io hoe "ny farany skateboard herinaratra ," ary izahay momba ny mahita ny antony. Ny KOOWHEL Electric Skateboard izao tonga amin'ny mizara roa ny Motors! Electric skateboard kokoa tontolo iainana namana, fanampiny hita ao amin'ny Mazava ho azy fa ny zozoro ora. Afaka mividy ny nanam bateria. raha izany, tsy manahy ny nihazakazaka avy tany bateria rehefa mampiasa azy io.
Post fotoana: Feb-01-2018